Dị ekwentị nwere ọtụtụ uru na nkeji nke abụọ nke 2018 | Gam akporosis
Ọtụtụ ndị na ụdị na-enye dị iche iche ọzọ ka ndị kasị ewu ewu na igwe na ahịaOlee otú Samsung Galaxy S9, ma ọ bụ Xiaomi Mi 8, ọmụmaatụ; ghara ikwu banyere ọtụtụ ndị ọzọ. Ndị a na-aga n'ihu na-echekwa n'ahịa dị ugbu a: ụfọdụ nwere nsogbu na ọnwụ ndị a ma ama, na ndị ọzọ nwere ezi atụmanya na-akwado nsonaazụ ha na ahịa. N'ezie, ekwesịrị iburu n'uche na ahịa ahụ juputara na oke, na asọmpi ahụ, kwa ụbọchị, na-arịwanye elu na enweghị mmachi ọ bụla, yabụ ụfọdụ ụlọ ọrụ na-agbadata nke ukwuu na ọnụọgụ ha, dị ka HTC.
N'ihe banyere ụlọ ọrụ siri ike, dị ka Samsung, Huawei, Xiaomi, Vivo na ndị ọzọ, ndị na-ahọrọ akụkụ gam akporo, n'ihi atụmatụ ha akọwapụtara nke ọma na atụmatụ ha rụrụ, yana aha ọma na nsonaazụ ọma ha rụpụtara site na Afọ, ha na-achọ iguzo ogologo ma nwee ọdịnihu dị mma n'ihu ha. Nke a bụkwa ihe gbasara Apple, ụlọ ọrụ America nke na-ahụ maka mmepe nke iPhones, nke na-eme nke ọma ma a bịa n'ahịa. Na njedebe, a chịkọtara ọnụ ọgụgụ, ndị na-ebili ma daa kwa afọ n'ihi ihe ụlọ ọrụ na-eme, nke anyị ga-agwa gị n'okpuru n'okpuru ekele ọhụụ ọhụụ ekpughere nke na-egosi anyị arụmọrụ nke ụdị dị iche iche.
Dika nyocha ohuru nke Counterpoint Market Monitor maka uzo nke abuo nke afo a (Eprel-June), Onu ogugu nke uwa nile toro banyere 4% kwa afo, jiri ya tụnyere otu oge ahụ n'afọ gara aga. Nke a bụ n'ihi aha ndị China, nke na-eme ihe ike na onyinye ha yana ezigbo ego ha nyere na ọtụtụ ụdị ha, dịka Xiaomi.
Dị ka data ndị ajuju ahụ si dị, ngụkọta ego nke ndị ọrụ China karịrị $ 2 ijeri na nke mbụ, na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ ise nke ngụkọta nke ngwaọrụ ndị rere.
Brandsdị ndị China na-eme atụmatụ ịbanye ọkwa ọkwa ọhụrụ na ngalaba kachasị. Branddị dịka Oppo, Vivo, na Huawei agbanweela asụsụ ha site na ịtinye anya na arụmọrụ ọhụụ na nkọwapụta ọrụ aka n'otu oge mgbe ihe ọhụrụ dị n'ime ekwentị abanyelarị na oke ya. Ihe atụ gụnyere Vivo Nex (Ultra FullView ngosi na mkpisiaka na ihuenyo), Oppo Chọta X (retractable igwefoto na Ultra FullView ngosi) na Huawei P20 Pro (igwefoto atọ).
Counterpoint Market Monitor na-atụ anya nkezi ire ahịa nke smartphones na-abawanye ọbụna. N’agbanyeghi nke a, mpịakọta ekwentị nwere ike kwụsie ike dịka ndị na - azụ ahịa na - eme ka smartphones dị ogologo. Nke a ga-enwerịrị ihe ha ga-enweta na OEM, ebe ndị na-eme smartphone na-achọ ịbawanye uru ha site na ịbawanye ọnụahịa ahịa ha na ịbanye ọkwa ọnụahịa ọhụrụ, ebe ahịa na-agbadata.
Apple ka bụ akara ama ama kachasị baa uru. IPhone X, nke jizi asụsụ ọhụụ mepụtara, nyeere Apple aka inweta ọnụ ahịa ọrịre dị elu karị (ASP) n'oge nkeji nke abụọ, n'oge ahịa ahịa ama ama ụwa malitere ịmalite.
Nchịkọta Ahịa - Q2 2018
Enweta ego ngwaọrụ ụwa mụbara 4% kwa afọ, weghara 11% nke ngụkọta ụlọ ọrụ ngwaọrụ zuru ezu na nkeji nke abụọ nke 2018.
Apple bụ akara ahịa kachasị baa uru na nkeji nke abụọ nke 2018 na ọnụọgụ ahịa 62% sochiri Samsung na 17% na akara ndị China: Huawei (8%), OPPO (5%), vivo (4%) na Xiaomi (3%) ) bụ ndị isi na-eto eto n'oge nkeji iri na ise.
E kesara 1% fọdụrụ nke uru ụlọ ọrụ kesara karịa ụdị ngwaọrụ 600.
Uru Samsung rutere 21% kwa afọ n'ihi ahịa na-esighi ike karịa nke Galaxy S9.
Mbupu nke Galaxy S9 usoro belatara 24% na nkeji nke abụọ nke 2018 ma e jiri ya tụnyere usoro Galaxy S8 na nkeji nke abụọ nke 2017.
Xiaomi (747%), Huawei (107%), vivo (24%) na OPPO (23%) bụ ndị ama ama ama ama ama ama ama ama ama uru na ngwa ahịa ha na nkeji nke abụọ nke 2018.
Brandsdị ndị China gafere akara $ 2.000 maka oge mbụ. Brandsdị ndị China na-aga n'ihu na-ewepụta ngwaahịa ngosipụta nwere njirimara na njedebe na atụmatụ ọdịnihu n'afọ niile. Nke a na - eme ire ahịa ma na - abawanye oke uru maka ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndị na-eme ekwentị n'eweta ego dị elu maka Q2018 XNUMX
Samsung ga - eweta ngụkọta nke Galaxy S10 anọ